ဘတ်ဂျက်ငွေ တောင်းခံရာတွင် ယောက္ခမသေလို့ အမွေခွဲသလို အပြိုင်အဆိုင် မတောင်းဘဲ လိုသလောက်သာ တေ?? - Yangon Media Group
ဘတ်ဂျက်ငွေ တောင်းခံရာတွင် ယောက္ခမသေလို့ အမွေခွဲသလို အပြိုင်အဆိုင် မတောင်းဘဲ လိုသလောက်သာ တေ??
ဘတ်ဂျက်ငွေတောင်းခံရာမှာ ယောက္ခ မသေလို့ အမွေခွဲသလို အပြိုင်အဆိုင်မတောင်းကြဘဲ လိုသလောက် သာတောင်းရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်တွင်တင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ စက်တင်ဘာ ၄ ရက် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင်၂ဝ၁၈/၂ဝ၁၉ခုနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတို့၏ မူနှင့် အခြေခံသဘောများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ ရငွေသုံးငွေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ် တော်ကိုယ်စားများ၏ ဆွေးနွေး ခြင်းအစီအစဉ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”လောလောဆယ်မှာ အလုပ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ မဟာစီမံကိန်းကြီးတွေ၊ မြေအောက်လမ်းတွေ၊ မြို့ထဲမိုးပျံ လမ်းတွေ၊ မြို့သစ်စီမံကိန်းကြီးတွေကို လုံးဝရပ်ဆိုင်းသင့်ရင်ရပ်ဆိုင်း၊ ယာယီရပ်ဆိုင်းပစ်တာမျိုး မဟုတ်ရင်လည်း ဖျက်သိမ်းဖို့လိုပါတယ်။ အစိုးရဌာနတွေရဲ့ ဘတ်ဂျက်ငွေတွေ ကို တောင်းရာမှာလည်း ယောက္ခမ သေလို့ အမွေခွဲသလို အပြိုင်အဆိုင် မတောင်းကြဘဲနဲ့ လိုသလောက်သာ တောင်းဖို့ လိုပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ နိုင်ငံ၏ လက်ရှိစီးပွားရေးအ ခြေအနေသည် အန္တရာယ်ရှိနေသော အချိန်ဖြစ်ကာ နိုင်ငံတကာစစ်တမ်းများအရ အချိန်မရွေးပြိုကွဲပျက်စီးနိုင်သည့် နိုင်ငံစာရင်းတွင် အဆင့် (၂၆)မှ (၂၂)သို့ မြင့်တက်လာကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ”နိုင်ငံကို ၂ဝ၃ဝပြည့်နှစ်မှာထိပ်တန်းစက်မှုနိုင်ငံကြီးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်မယ်လို့ ကြွေးကြော် နေမယ့်အစား လောလောဆယ်ပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးပြေလည် အောင်လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
မိမိတို့အစိုးရတက်စက ခြိုး ခြံချွေတာသည့်အနေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန(၁၈)ခုသာထားပြီး ဒုတိယဝန်ကြီးများလည်းမခန့်ခဲ့ဘဲ ဝန်ကြီးတစ်ဦး ကားလေးစီးယူမည့်အစားကာတစ် စီးသာယူပါဟု ပြောခဲ့သည့်အတွက် ပြည်သူများက ကျေနပ်အားရခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲ သွားကြောင်း ဘတ်ဂျက်လိုငွေလျှော့ချရေးအတွက် နောက်ထပ်လုပ်သင့်သည့်အလုပ်မှာ ဌာနများမှမလိုအပ်သည့့် ရာထူးများ လျှော့ချဖို့ပစ်ရန် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ”ယခင်အစိုးရလက်ထက်က ကျန်တဲ့သိန်း(၁ဝဝဝ)တန် မာစီဒီးကားတွေကိုခွဲဝေမယူကြဘဲ လေလံတင်ရောင်းချမယ်ဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။ အစိုးရဌာနတွေမှာ ပိုလျှံနေတဲ့ရာထူးတွေ ဖောင်းပွနေတဲ့ရာထူးတွေကိုလည်း ဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ညွန်ချုပ်တွေ ဒုညွှန်ချုပ်တွေရှိနေပါလျက်နဲ့ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်တွေ၊ ဒုတိယအမြဲတမ်း အတွင်းဝန်တွေ အများကြီးခန့်အပ်တာကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ရေ တိုက်စားမှုကြောင့် ပန်းတနော်မြို့နယ်ရှိ ဇေယျသိဒ္ဓိ အောင်တော်မူ စေတီတော် မြစ်ထဲ